အနှစ်ချုပ်အီးမေးလ် Template တွေ့ဆုံ
အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင် သင်၏ပါဝင်မှုကို ကြေညာရန် အီးမေးလ်ပုံစံပုံစံ...
တစ်အားလပ်ရက်တောင်းဆိုချက်အတွက်အီးမေးလ်က template ကို
2022 တွင် ပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုရယူရန် အဘယ်နည်းဗျူဟာများ။
MOOC EIVASION "အခြေခံများ" သည် အတုလေဝင်လေထွက်၏ အခြေခံများကို မြှုပ်နှံထားသည်။ ၎င်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ သင်ယူသူများကို စတင်ရန်ဖြစ်သည်။
aux grands principes de la physiologie et de la mécanique respiratoire permettant d’interpréter les courbes du ventilateur,
invasive နှင့် non-invasive ventilation တွင် main ventilation modes ကို အသုံးပြုခြင်း။
၎င်းသည် သင်ယူသူများကို ဆေးခန်းအခြေအနေများစွာတွင် သင့်လျော်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ သင်ကြားသူများအား အတုလေဝင်လေထွက်ဖြင့် လည်ပတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
La ventilation artificielle est le premier support vital des patients critiques. Il s’agit donc d’une technique incontournable de sauvetage en médecine intensive-réanimation, en médecine d’urgence et en anesthésie. Mais mal ajustée, elle est susceptible d’induire des complications et d’augmenter la mortalité.
ဤ MOOC သည် သရုပ်ဖော်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ အထူးဆန်းသစ်သော ပညာရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ EIVASION သည် တုပခြင်းမှတစ်ဆင့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင် ဆန်းသစ်တီထွင်သင်ကြားခြင်းအတွက် အတိုကောက်ဖြစ်သည်။
MOOC EIVASION "အခြေခံများ" ၏အဆုံးတွင်၊ သင်ယူသူများသည် FUN တွင် လူနာ-လေဝင်လေထွက်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများနှင့် ဒုတိယ MOOC ဖြင့် လေဝင်လေထွက်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့အလေ့အကျင့်တို့ကို ပိုမိုနားလည်လာစေရန် အခွင့်အလမ်းများရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဆရာများအားလုံးသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေဝင်လေထွက်နယ်ပယ်တွင် ကျွမ်းကျင်သော ဆေးခန်းများဖြစ်သည်။ MOOC EIVASION သိပ္ပံဆိုင်ရာကော်မတီကို ပါမောက္ခ G. Carteaux၊ ပါမောက္ခ A. Mekontso Dessap၊ ဒေါက်တာ L. Piquilloud နှင့် ဒေါက်တာ F. Beloncle တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အတုလေဝင်လေထွက်- အခြေခံအချက်များ ဒီဇင်ဘာလ 10, 2021Tranquillus
ဖတ်ရန် ဆိုက်ဘာအကျပ်အတည်း- လေ့ကျင့်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းအတွက် လမ်းညွှန်များစုစည်းမှု
လွန်ခဲ့သောအစားအစာလုပ်ငန်း- စွမ်းအင်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပါ။
SOS ဝေါဟာရ: ဘာသာစကားအားလုံးနဲ့စကားဝိုင်းဘယ်လိုစမလဲ။
Word မှမှတ်တိုင်များနှင့် tabs များစနစ်ကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်နည်း။
Excel အခမဲ့စတင်ခြင်း - အခြေခံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ